Ravalomanana tany Morondava : Saika hanao fitaovana ny fiangonana Katôlika -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana tany Morondava : Saika hanao fitaovana ny fiangonana Katôlika
Ravalomanana tany Morondava : Saika hanao fitaovana ny fiangonana Katôlika
28/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tao Morondava no nankalazana ny Jne ( Journée Nationale des Enfants) na andro iraisam-pirenena ho an’ny Ankizy, ho an’ny finoana katolika. Nisy ny fotoam-bavaka lehibe nentina nanamarihana an’izany tao amin’ny Katedraly Maria Manjaka Namahora any Morondava. Fotoan-dehibe, mahavory olona tokoa io omaly io. Gaga ny rehetra nahita ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc nipetraka tery amin’ny seza misy ny vahiny nasaina. Fantatry ny rehetra fa sady tsy Katolika izy no sady tsy filoham-pirenena am-perinasa koa. Mby ao an-tsain’ny rehetra avy hatrany ny fikasan’ity filoha teo aloha ity hanao fitaovana politika indray ny finoana kristiana. Efa mpanao an’izany mantsy izy, araka ireny fitetezana fiangonana hataony ireny ary manararaotra miseho amin’ny tambazotra sosialy sy an-gazety avy eo : “propangady vita”.
Tena izay tokoa no nitranga tamin’ity fotoam-pivavahana tany Morondava ity. Satria dia nangataka tamin’ny mpikarakara an’ity fotoan-dehibe ity ny tenany mba handray fitenenana. Rehefa nandeha anefa ny fotoana namakian’ny mpiandraikitra ny anaran’ireo izay handray fitenenana, dia tsy tao anaty lisitra ny anarany. Vao naheno an’iny ingahy Ravalomanana Marc dia nitsaitsaika nivoaka.
Gaga ny rehetra nahita ity filoha teo aloha ity nivoaka ny toerana nisy an’ireo vahiny nasaina. Midika miharihary izany fa tsy hivavaka velively no anton-diany tao fa fisehosehoana ivelany sy pi-maso hatao amin’ny Katolika. Ao anatin’ny fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana rahateo izy, ka nihevitra fa rehefa fiangonana dia azony hidirina hatao fitaovana avokoa. Fanimbazimbana ny finoana mihitsy ny fihetsik’ity filoha teo aloha.
Tonga nanatrika ity lamesa ity koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nampiseho ny maha olon’ny finoana azy izy ary nanaja ny fomba fivavahana izay nizotra teo. Nambarany fa manana ny finoany izay tsy azo hozongozonina izy.
Ny rehetra dia mahalala fa zava-dehibe ny fandraisan’ny rehetra ny “tsodrano” tononin’ny mpitarika ilay lamesa aorian’ny fotoam-bavaka tahaka itony kanefa dia nozimbazimbain’ity filoha teo aloha ity izany fomba izany. Naleony nivoaka sy niala. Raha tsy te hihaino izay lahatenin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, tsy nampaninona ihany, fa kosa tsy azo anehoana fihetsika feno fihatsaram-belatsihy sy fanimbazimbana ny fomba fivavahana tahaka izany ny tranon’Andriamanitra.
“Efa eo ampanangonana ny porofo rehetra mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana amin’izao fotoana izao”, io no nambaran’ny filohan’ny KMF/CNOE, Andoniaina Andriamalazaray taorian’ny famoahan’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Nambaran’ ity filohan’ny fiarahamonim-pirenena, ...Tohiny
Tatitry ny mpanara-maso UE : Nividy vato i Andry Rajoelina